जीवनलाई कसरी चरित्रवान बनाउने ? - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
जीवनलाई कसरी चरित्रवान बनाउने ?
प्रकाशित मिती : आइतवार, असार १०, २०६९ by admin · Comments
अहिलेसम्म विज्ञानले धेरै उन्नति गरेर मानिसहरुलाई धेरै सुविधा मात्र दिएको छैन अपितु चन्द्रमासम्म पुगेर त्यहाँ बस्न योग्य छ वा छैन त्यसको समेत अध्ययन गरिसकेको छ । उक्त प्रकारको उन्नति गरेता पनि मानिसलाई चरित्रवान् तथा नैतिकवान बनाउन सकेन तर झन् झन् गिर्दै गएको छ । यस विश्वमा यस प्रकारको नैतिकहीन चरित्र सत्ययुग तथा त्रेतायुगमा त के यो कलियुगको केही समय अगाडिसम्म पनि थिएन । विगत एक सय वर्ष अगाडिका कुराहरु मात्र स्मृति गर्दा पनि त्यस समयभित्र हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ । अब त वायुमण्डल नै बदलेको छ र यस दुनियामा सुख विल्कुलै छैन । कसैले सुखको अनुभव गरेता पनि त्यो क्षणिक रहेको छ । स्थायी सुख पाउन सकेका छैनन् । यसरी के भन्न सकिन्छ भने यो जीवन कौडीतुल्य भएको छ । त्यसैले न मानिसमा दैवीगुण नै छ न त सच्चा शान्ति नै छ । जसरी विश्वको सम्पूर्ण मानिसहरु निराशा भएका छन् । हुनत आध्यात्मिक रुपमा पनि विश्वको सुख तथा शान्तिको लागि दुई हजारभन्दा बढी समयदेखि प्रयास गर्दै आएको छ । विश्व शान्ति र सुखको लागि कैयौंले विभिन्न प्रकारको यज्ञ, जप, तप गर्नुको साथै विभिन्न मन्दिरहरुमा धाउँदै आएका छन् । तर विडम्वना सुख शान्तिको बदलामा चरित्रहीन तथा मानिसहरु झन् झन् गिर्दै आएको छ । आज मानिसहरुलाई यो डर उत्पन्न भएको छ कि अब यो संसारमा सुख पाउन सकिने छैन । यसरी संसार गिर्दै गएकोले मानिसहरु निराश भएका छन् र अब यो संसारलाई सुधार गर्न सकिँदैन होला ।
सबैजसो मानिसहरुमा निराशको साथसाथै सुखका लागि भगवान्लाई पुकार्दै आएका छन् । तथापि भगवान्लाई चिनेको छैन । त्यति मात्र नभई मानिसहरु मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा आदि ठाउँहरुमा धाउँदै छन् । केही मानिस यो पनि भन्ने गर्छन् यदि ईश्वर भएको भए किन यहाँ आउनु भएन ? मनुष्य मात्रलाई सदाचारको पाठ किन पढाउनु हुन्न र दुःखको अन्त्य गरेर सुखको स्थापना गर्नुहुन्न ?
मानिसहरुले बुझिसकेका छन् कि यो संसारमा सम्पूर्ण पवित्रता, सुख र शान्ति स्थापना गर्ने कार्य कुनै मानिसले गर्न सक्दैन । निश्चय नै मनुष्यले यो महान् कार्य गर्न सक्दैन । विश्वमा पूर्ण पवित्रता, सुख तथा शान्ति एकै भगवान्ले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा मानिसहरुमा पलाएको छ । भगवान् ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर, आनन्दको सागर, सर्वशक्तिमान, पतीत पावन हुनुहुन्छ । अतः यस पतीत दुनियाँलाई भगवान्ले नै पावन बनाउन सक्नुहुन्छ । यसरी विश्वलाई सुख, शान्ति, आनन्द प्रदान गर्ने कार्य कल्याणकारी कार्य हो र त्यो काम भगवान्ले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो कल्याणकारी भगवान्लाई परमपिता परमात्मा शिव भनिन्छ । शिव भगवान्ले जब यो कार्य गर्नुहुन्छ तब कलियुगको अन्त्य हुन्छ । अर्थात् दुःखको अन्त्य हुन्छ । यो भनेको यो कलियुगलाई भगवान्ले सत्ययुग बनाई दिनुहुन्छ तब विश्वमा दुःख र अशान्तिको नाम निशान हुने छैन । परमपिता परमात्माले यो कार्य प्रत्येकको अन्त्यमा आएर गर्नुहुन्छ । अर्थात् पाँच हजार वर्षको एउटा कल्प हुने भएकोले भगवान् पाँच हजार वर्षको अन्ततिर जुनबेला कलियुग र सत्ययुगको संक्रमण समय भएकोले संयम युगमा परमधामबाट अवतरण गर्नुहुन्छ ।
विगतका दिनहरुमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेकाहरुले भगवान् सम्बन्धमा आफूले भनेका कुराहरु तर्कसंगत प्रमाणित गर्न नसकेकाले मानिसहरुको धर्मप्रति विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ अर्थात् नास्तिकता बढ्दो छ । नभन्दै विभिन्न धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि मनुष्य मात्र अनुवाद लेखेर केही पक्षहरुमा सुन्दर कथाहरु प्रस्तुत गरेता पनि व्यवहारमा लागू नहुने, तर्कहीन उल्लेख गरिएका कुराहरु असम्भव आदि देखिएकोले ती कुराहरु मानिसहरु स्वीकार्न तयार छैनन् । अपितु अहिले पनि रामायण, महाभारत, गीता, सप्ताह गर्दा मानिसहरुको भीड लाग्ने त गर्छ तर उपलब्धी केही छैन, किनभने संसार झन् झन् दुखित बन्दै गइरहेको छ ।
संसारमा भगवान्को अवतरण भयो भनेर भन्दा धेरै मानिसहरु आश्चर्य मान्छन् होला । वास्तवमा गीतामा उल्लेख भएझैं यस संसारमा जब जब धर्मको ग्लानी हुन्छ तब नै भगवान्को अवतरण हुन्छ भन्ने कुरा यथार्थ हो । विश्वमा धर्मको ग्लानी भएको विगत ७०÷८० वर्ष जति भयो, यो सबैले बुझेकै कुरा हो । यस समयभित्र धेरै पक्षहरु भए, त्यसैले मानिसहरुलाई खानेकुराहरुमा खर्च गर्नुभन्दा रसायनिक हतियारको निर्माण भयो । अहिलेसम्म पनि युद्धका सामग्रीहरु निर्माणमा शक्तिशाली भनाउँदा देशहरुले हतियारको निर्माणमै बढी ध्यान दिइरहेको छ । त्यसैले यस पतीत दुनियालाई पवित्र बनाई मानिसहरुलाई दुःखबाट मुक्त गर्न परमपिता परमात्माको अवतरण भएको छ । उहाँ लेखराज नामको एक साधारण व्यक्ति जसको तनमा भगवान्को अवतरण भयो र उहाँको तनबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आउनुभएको ७५ वर्ष भइसकेको छ । माथि पनि भनि सकिएको छ कि संसार ज्यादै जटिल मोडमा पुगिसकेको छ । र यसलाई कुने पनि मनुष्यले समस्यालाई समाधान गर्न सक्नेछैन । अतः परमात्माको अवतरण भई यस संसारलाई बदल्नुको बाहेक कुनै विकल्प नै छैन । हामीदेखि रहेका छौं आज विश्वको विनाशको लागि एटम तथा हाइड्रोजन बम तयार भइसकेको छ र संसारमा भ्रष्टाचार तथा पापाचार पनि बढिसकेको छ । साथै विश्वमा यति धेरै जटिल समस्याहरु थुप्रिसकेको छ कि अब परमपिता परमात्माले बाहेक कसैले सुधार्नै सक्दैन । अतः अहिले परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्माका सम्पूर्ण पवित्रता, सुख, शान्ति जस्ता ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार हामीलाई दिइरहनुभएको छ । तर यी कुराहरु प्राप्त गर्नको निमित्त हामी आफैले पनि भगवान्ले दिनुभएको बाटोलाई आत्मसात गरी व्यवहारमा लागू गरी हाम्रा सारा खराब चरित्रहरु तथा अनैतिक स्वभावहरु त्याग्नु छ । तब नै हामी पुनः चरित्रहीन अवस्थाबाट चरित्रवान् बन्न सक्छौं ।